Sida Loogu Fasaxo Macaamiisha Ololahaaga Soo Socda | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 16, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dhowr toddobaad ka hor, waxaan rakibnay Ooma - xalka VOIP ee guri ama ganacsi yar. Waa wax la yaab leh - xitaa isku dhafka Google Voice (oo ah lambarka taleefanka shirkadeena). Maanta, waxaan helnay emaylkan isla markiibana waan jeclaaday.
Su’aashaasi waa su’aasha kaliya ee aad runtii u baahan tahay inaad weydiiso macaamiishaada markay tahay qanacsanaanta. Marka ay macaamiishaadu sumcaddooda ku qoraan khadka si ay ugu taliyaan ganacsigaaga, waxaad ogtahay inaad shaqo fiican qabanayso.
Su'aal keliya oo su'aal ah tan oo kale ayaa iyaduna si gaar ah u khuseysa maalmahan… Ma haysto waqti aan ku faahfaahin karo oo aan kaga jawaabo sahan ballaadhan. Mar alla markii aad gujiso sahankan, waxaa lagu keenay bogga soo degitaanka iyadoo la iibiyo 1 illaa 10 iyo dhawr meelood oo ikhtiyaar u ah macluumaadkaaga xiriirka.
Markaad dhammeyso gudbinta ra'yi-ururintaada, waxaa lagugu keenay bog degitaan oo dheeri ah:
Cajiib ah! Boggan degitaanku wuxuu ka kooban yahay bulsho si uu ula wadaago dalab gaar ah asxaabtaada midkood. Waxaad dhahday waad kugula talin laheyd… hada Ooma waxay kaa codsaneysaa inaad horay usocoto oo aad sidaas sameyso. Kani waa mid ka mid ah emayllada ugu fudud uguna wanaagsan ee loogu talagalay, bogga soo degida iyo ololeyaasha isku dhafan ee bulshada ee aan soo arkay.
Ololaha waxaa awood u leh Zuberance, yaa leh bayaanka howlgalka soo socda:
Warbaahinta bulshada waa awood awood leh, oo aan la joojin karin oo isbeddelay suuqgeynta. Hadafkeenna Zuberance waa inaan u oggolaanno suuqleyda inay ka faa'iideystaan ​​awoodda warbaahinta bulshada si ay u kaxeeyaan hoggaamiyeyaal tayo leh, taraafikada, iyo iibka. Waxaan tan ku sameeynaa annagoo siinayna suuqleyda tiknoolajiyad awood leh taas oo ka dhigaysa mid fudud fududeynta iyo dhiirrigelinta U-doodayaasha Magaca ee Facebook, Twitter, LinkedIn, Amazon, Yelp, websaydhyada caanka ah, aaladaha moobaylka, iyo in ka badan.